Ukukhetha igeji yokucindezela enhle kakhulu > Isifo sikashukela
Iyiphi i-tonometer enembile futhi ithembekile ngokwengeziwe
Izinkinga ngomfutho wegazi zingavela kumuntu nganoma iyiphi iminyaka, ngakho-ke insiza yokulinganisa umfutho wegazi kufanele ibe semakhaya onke - ngokubhekisisa izinkomba, ungabona izifo eziningi ezimbi ekuqaleni kwesigaba sokukhula. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zamadivayisi, ngayinye enezinzuzo zayo nokubi kuyo.
Kunezinhlobo eziningi zama-tonometer omfutho wokulinganisa
I-tonometer ibhekisela kudivayisi yokuxilonga yezokwelapha yengcindezi: okwejwayelekile kwe-diastolic ngu-80 mm Hg. Ubuciko., Kanye ne-systolic - 120 mm RT. Ubuciko. Ngenye indlela, le divayisi ibizwa nge- sphygmomanometer. Kuqukethe i-manometer, i-blower yomoya efakwe i-valve yohlobo olungenakuguqulwa, ne-cuff egqoke engalweni yesiguli. Unga-oda idivaysi efanelekile namuhla emakhemisi aku-inthanethi ngokulethwa. Ungahluka ngamapharamitha alandelayo:
Uhlobo (okwenziwe ngomshini nange-elekthronikhi, oluzenzakalelayo noluzenzakalelayo),
Izinkomba ezijwayelekile zingaphambuka ziye phezulu futhi zingaphezulu kuka-10 mm. Hg. Ubuciko. Uma ukuphambuka kudlula kubo, khona-ke lokhu kukhombisa ukuthi uhlelo lwesifo senhliziyo nesiguli lunenkinga ye-pathology. Uma umfutho wegazi uhlala uphakama njalo, khona-ke lesi yisifo esivele sibe nomfutho wegazi, okugcwala ukushaya kwenhliziyo nokushaywa unhlangothi. Ukuze uthole ukwelashwa okulungile, ukuqapha nsuku zonke umfutho wegazi, owenziwa kusetshenziswa i-tonometer, kuzodingeka. Idivayisi enjalo iyasiza:
qapha njalo imiphumela yokwelashwa lapho uphuza udokotela ngamaphilisi noma usebenzisa ezinye izindlela zokwelapha,
uma ukonakala kwezempilo (ikhanda, isiyezi, isicanucanu, njll), ngesikhathi sokunquma ukugxuma okubukhali kwengcindezi yegazi futhi uthathe umuthi ofanele,
ukulawula ushintsho ngemuva koguquko kwindlela yokuphila enempilo: ukuzibandakanya kwezemidlalo, ukuyeka utshwala, ukubhema, njll,
Musa ukuchitha isikhathi uvakashela isikhungo sezokwelapha, kepha thatha ukukala ekhaya,
Kunconywa ukuba ube nale divayisi kwikhabethe yemithi yasekhaya yabo bonke labo bantu abahlushwa yizifo zenhliziyo, isifo sikashukela, i-vascular pathologies, abanenkinga yokucindezelwa okuqhubekayo nokucindezelwa kwengqondo, nokukhubazeka kwama-hormone. Ngaphezu kwalokho, idivaysi ngeke ibe phezulu kulabo abavame ukuphuza utshwala nokubhema, kanye nabasubathi ukulawula okulungile kokusebenza komzimba kanye nokuguga ngenxa yokuwohloka okujwayelekile kwempilo. Ngokwezinkomba, ukukalwa okucindezelwa kwegazi kunganconywa kwabesifazane abakhulelwe.
Ukuhlukaniswa kwamathuluzi wokulinganisa ingcindezi
Ukukhetha idivaysi elula futhi elula ukuyisebenzisa, hlola isigaba. Amaqembu amadivayisi ngokuya ngezinga lokubamba iqhaza kweziguli kulenqubo yokulinganisa, indawo ye-cuff kanye nokusebenza kwayo kuvezwe ngezansi. Ngokwehlukana, kungenzeka ukuhlukanisa amadivayisi ngomkhiqizi, kepha umbuzo wokukhetha uhlobo lomkhiqizo akuyona eyinhloko, ngoba iningi lokukhiqizwa kwemishini yezokwelapha yangaphandle likhona eChina.
Ngokwezinga lokubamba iqhaza kweziguli kule nqubo
Kukholakala ukuthi amathuluzi okuqala okulinganisa ingcindezi avela e-Austria ngo-1881. Ingcindezelo kuleyo minyaka yayilinganiswa kusetshenziswa i-manometer ye-mercury. Ngemuva kwalokho, udokotela ohlinzayo waseRussia uN. S. Korotkov wachaza indlela yokulinganisa amathoni we-systolic kanye ne-diastolic ngokulalela. Yikuphi i-tonometer enembile: ngokuhamba kwesikhathi, amadivaysi emishini aqala ukuvela awodwa azenzakalelayo, kamuva aqala ukugcwala ngamadivayisi azenzakalelayo. Umehluko phakathi kwazo zonke lezi zinketho ezintathu yizinga isiguli esihlanganyela kulo inqubo yokulinganisa:
Tame. Ukumpompa kanye nokungena ngaphakathi kwenziwa ngesandla usebenzisa iparele. Ukucindezela kunqunywa ngendlebe nge-stethoscope, kubhekwe ukufundwa komcibisholo wokushayela.
Ezenzakalelayo. Umoya uphonswe esibunjini, futhi isilinganiso senhliziyo kanye nomfutho wegazi kukhonjiswa ngaphandle kwe-stethoscope.
Ngokuzenzakalelayo. Umoya ukhuphuka yi-compressor, bese ukhipha i-valve. Umphumela uboniswa esibukweni. Umshini we-tonometer usebenza kusuka kunethiwekhi usebenzisa i-adaptha noma kumabhethri.
Ngendlela i-cuff ebekwe ngayo
Isici esibalulekile indawo ye-cuff nosayizi wayo. Lesi sakhi siqukethe indwangu (ikakhulukazi i-nylon) etholakala ngaphakathi kwegumbi le-pneumatic kanye neziqeshana (ama-fasteners) ngesimo seVelcro. Ngaphakathi, yenziwe ngerabha yezokwelapha. Ukucindezela isandla sesiguli nokuvimba ukuhamba kwegazi emithanjeni ukuthola inkomba eqondile, le nto igcwele nomoya. Ngokuya ngemodeli, lesi sakhi sitholakala ehlombe, esihlakaleni nangomunwe:
Ehlombe. Inketho ejwayelekile evumelana nazo zonke izigaba zobudala. Izitolo eziku-inthanethi zinikeza anhlobonhlobo ama-cuffs kusuka ezinganeni kuya ezinkulu kakhulu.
Esihlakaleni. I-Optimum kuphela yabasebenzisi abasebasha, ikakhulukazi esimweni sokulawulwa kwengcindezi ngesikhathi sokuqina komzimba, ngesikhathi semidlalo. Kubantu asebekhulile, ubufakazi kungenzeka ukuthi abulungile. Ngaphezu kwalokho, ayilungele ukuthuthumela, isifo sikashukela, i-vasler sclerosis.
Emunweni. Inketho elula kakhulu kepha incane. Ngalesi sizathu, akubhekwa njengezinto ezingathi sína zokwelapha.
Ngokutholakala kwemisebenzi eyengeziwe
Amamodeli alula futhi webhajethi awanayo imisebenzi eyengeziwe, kepha ukuba khona kwawo kungaba yinhlanganisela enhle lapho ukhetha i-tonometer ethile. Ukusebenza okwengeziwe, kulula futhi kulula kakhulu ukwenza inqubo yokulinganisa umfutho wegazi. Amadivaysi anamuhla wobuchwepheshe obuphakeme angaba nawo:
Inani lememori, okuyinto ezimweni eziningi lenzelwe ukukalwa kwe-1-200. Ngibonga yena, idivaysi izogcina imininingwane mayelana nazo zonke izilinganiso ezithathiwe - lokhu kudingeka kakhulu uma abantu abaningana besebenzisa idivaysi.
Ukuxilongwa kwe-arrhythmia, i.e. ukuphazamiseka kwesigqi. Kulokhu, imininingwane izoboniswa esibukweni esifundisayo. Ngaphezu kwalokho, kunesiginali yomsindo.
Ukuphathwa Kwengqondo, noma i-Intellisense. Umsebenzi onganciphisa amathuba wephutha phambi kwama-arrhythmias enhliziyo. Kutholakala kumamodeli abizayo kuphela.
Ukubizwa kwezwi komphumela. Lesi sici sibaluleke kakhulu kwiziguli ezinezinkinga zokubona.
Shesha ukubonisa. Isici esikahle sabaqalayo. Kukhombisa ukucindezela okujwayelekile komsebenzisi noma ukungasebenzisi umbala.
Umsebenzi wokwenza izilinganiso eziningana zokucindezela kwegazi ngokulandelana (kaningi 3) ngokubalwa kwenani eliphakathi. Lokhu kungenzeka kuyadingeka ukuze i-fibrillation ye-atrial, isb. i-fibrillation ye-atrial.
Ungayikhetha kanjani i-tonometer yokusetshenziswa kwasekhaya
I-algorithm yokukhetha ilula. Kubalulekile ukuthola uhlobo oluthile lwedivayisi, kucatshangelwa imvamisa yokusebenza kwensiza, iminyaka yesiguli, ukuba khona kwezifo zenhliziyo, njll. Yikuphi i-tonometer enembe kakhudlwana - indlela yokukhetha:
Imvamisa yokusebenza kanye nenombolo yabasebenzisi. Umshini othomathikhi noma idivaysi ye-semiautomatic ilungele ukusetshenziswa kaningi, kepha uma inani labasebenzisi lingaphezu kwelilodwa, kuyanconywa ukukhetha imodeli enomsebenzi wememori.
Isigaba sobudala seziguli. Kubantu abancane nabaphakathi kweminyaka, omabili ama-emahlombe ne-carpal manometers afanelekile. Isiguli esikhulile kufanele sikhethe ihlombe kuphela. Lokhu kungenxa yokuthi imithambo yejoyinti elihlanganayo liguga ngokuhamba kwesikhathi, ukuqina kwezindonga zazo kuyancipha, i-arthrosis (izifo ezihlangene) kwenzeka, futhi amathambo aqala ukuvela. Zonke lezi zinto zingahlanekezela ukunemba kwezilinganiso zokucindezela kwegazi.
Usayizi weCuff. Imikhiqizo ethandwa kakhulu yimikhiqizo ehlombe - ngaphansi kwehlombe ku-terminology yezokwelapha ibhekisa endaweni ukusuka emahlombe ehlangene kuya emlenzeni. Lolu hlobo lwethulwa ngosayizi abaningana, abanye babo bakhona, abanye bafanele izingane noma abantu abadala kuphela. Ukuqhekeka okungenzeka kutafula:
Ukujikeleza kwengalo maphakathi phakathi kwehlombe nejoyinti elihlanganisiwe (cm)
Ukuba khona kwesifo senhliziyo. Uma isiguli sinezinkinga zokubetha kwenhliziyo (i-arrhythmia), khona-ke ithuluzi elisebenza ngokulinganisa kokuqonda kufanele likhethwe.
Ithuba lokukala ingcindezi ngokuzimela. I-sphygmomanometer yemishini ilungele kuphela odokotela nabahlengikazi abakwaziyo ukuyisebenzisa, ngoba ngesikhathi sokulinganiswa kwengcindezi yegazi udinga ukulalela izinhlamvu ezine-stethoscope. Ngalesi sizathu, kufanele kukhethwe umshini we-semi-automatic / othomathikhi ukusetshenziselwa ikhaya. Igcwele ngezinto ezibucayi zogesi, yona uqobo ezonquma ukushaya kwayo ngokunembile.
Inkampani yezokukhiqiza. Abakhiqizi abaziwayo bama-pressure gauge afaka u-AND no-Omron (bobabili iJapan), iMicrolife (Switzerland), Beurer (Germany). Ngaphezu kwalokho, FUTHI unobuchwepheshe obunelungelo lobunikazi bokulinganisa kwe-oscillometric kwengcindezi yegazi - bekungokokuqala ukuthola ilungelo lobunikazi kule ndlela, esetshenziswa kumadijithali edijithali. U-Omron ukhuthaza ngentshiseko imikhiqizo yakhe phakathi kwezilaleli ezikhuluma isiRussia, ezinomthelela omuhle ebhizinisini lale nkampani.
Iyiphi i-tonometer enembile kunazo zonke
Okunembe kakhulu yithuluzi le-mercury, njengoba ingcindezi, ngokwencazelo, ilinganiswa ngamamilimitha we-zebus (mmHg). Kumakhemisi, awathengiswa, athengisiwe futhi anazo zonke iziphikiso zemvelo zamamitha ezandla. Kunzima kakhulu ukukala umfutho wegazi ngokwakho ngedivayisi ebanjwa ngesandla - udinga ukuba namakhono, ukuzwa okuhle nokubona, okungezona zonke iziguli ezinazo. Ngaphezu kwalokho, kanye ezinyangeni eziyisithupha udinga ukukala (ukumisa) esikhungweni esikhethekile.
Idivaysi ezenzakalelayo ingaqamba amanga, inephutha elithile (livame ukushiwo cishe ngamamitha ayi-5), kepha ezimweni eziningi lokhu akubalulekile ekukhetheni ukwelashwa. Azikho izindlela zokusebenzisa imishini yokulinganisa umfutho wegazi ukuze isetshenziswe ekhaya, kuphela kudingeka ukwazi ukuzisebenzisa kahle. Yikuphi i-tonometer enembe kakhudlwana: ngokusho kochwepheshe abavela elabhorethri yezwe yokulinganisa yezwe, iphesenti lezilinganiso ezingalungile yile:
I-5-7% ye-AND, Omron,
cishe i-10% yeHartmann, Microlife.
Ukuthola ukuthi iyiphi i-tonometer enembile, naka amadivaysi emishini. Ziqukethe i-cuff ebekwe ehlombe, i-manometer kanye ne-blower yomoya ene-valve eguquguqukayo. Izinkomba zokucindezela kwegazi zisetwa ngokulalela imisindo yezinhlamvu nge-stethoscope. Umfutho wegazi kuleli cala ulinganiswa ngumuntu onamakhono afanele, ngakhoke lolu hlobo lwemishini luyanconywa kubasebenzi bezempilo. Ngokuvamile kusetshenziswa ezikhungweni zezempilo zomphakathi, njengezibhedlela. Yikuphi i-tonometer enembe kakhudlwana - amamodeli athandwayo:
Ezempilo CS-105. Ukulungiselela imishini yokusebenza endaweni yensimbi ecaleni le-CS MEDICA. Kukhona ifonendoscope eyakhelwe ngaphakathi, i-cuff (22-36 cm) eyenziwe yenyoni enendandatho yensimbi yokulungisa, i-bulb elastic ene-valve yenaliti nesihlungi sothuli. Kuhlanganiswe icala lokugcina impahla elilungele. Ngokushibhile (870 k.).
Kwezempilo CS-110 Premium. Idivaysi ekhonjiweko igeji yayo ihlangene neparele. Yenziwe ecaleni le-polymer ye-shockproof enamathela nge-chrome. I-cuff ekhulisiwe (22-25 cm) isetshenziswa ngaphandle kokubakaki okulungiswayo. Kukhona ukudayela okuningana futhi okufundeka kalula, okumnandi kumthambo wokuthinta onama-drain valve we-chrome-plated drain. Ukunemba kokulinganisa kuqinisekiswa yi-European10 EN1060. Kuyabiza kakhulu kune-analogues (3615 k.).
I-Microlife BP AG1-30. Le sphygmomanometer ngokunemba okuphezulu iqukethe iparele, i-valve yangaphakathi, nesikhwama sokugcina. Kusetshenziswa i-cuff yobungcweti (22-32 cm) enendandatho yensimbi. Imodeli idumile phakathi kodokotela basekhaya. Isici esiyingqayizivele ikhanda le-stethoscope lithunyelwe ku-cuff. Kuyabiza (1200 p.).
Umgomo wokusebenza kwe-sphygnomanometer
Lapho ulinganisa, kufanele kufakwe i-stethoscope ngaphakathi kwendololondo. Ngemuva kwalokhu, uchwepheshe udinga ukupompa umoya ku-cuff - lokhu akwenzayo kuze kuthi, ngenxa yokucindezelwa, inkomba yomfutho wegazi ingabi yi-30-40 mm RT. Ubuciko. ingcindezi ye-systolic (umkhawulo ophezulu) wohlolo. Lapho-ke umoya uyadedelwa kancane ukuze ingcindezi ku-cuff inciphe ngejubane le-2 mm Hg. ngomzuzwana.
Kancane kancane ukuwa, ingcindezi ku-cuff ifinyelela inani le-systolic esigulini. Embukisweni oshubile njengamanje, kuzwakala imisindo ebizwa ngokuthi yi- “Korotkov tones”. Ingcindezi ye-Diastolic (engezansi) yisikhathi sokuphela kwalezi zingqondo. Isimiso sokusebenza sinje:
Lapho umfutho womoya ku-cuff uphakeme futhi udlula ipharamitha efanayo emikhunjini, imithambo yegazi iyacindezelwa kuze kufike lapho igazi lihamba ngayo. Ku-smthoscope, kuthula ngaphakathi.
Lapho ingcindezi engaphakathi kwe-cuff incipha futhi ukukhanya kwe-artery kuvuleka kancane, ukuphuma kwegazi kuyaqala. Ku-stethoscope ngalesi sikhathi, amathoni weKorotkov aqala ukuzwakala.
Lapho ingcindezi izinza futhi i-artery ivuleka ngokuphelele, umsindo uyanyamalala.
Izinzuzo nokudlanga kwamadivayisi okwenziwa
Yikuphi i-tonometer enembe kakhudlwana - lapho uphendula lo mbuzo, kudonswa insimbi esebenza ngomshini. Izinzuzo zedivaysi yemishini:
ukunemba okuhlaba umxhwele
ilungele ukukala umfutho wegazi ngisho nasezigulini ezine-arrhythmia.
Okubi kakhulu ngobunzima bokusebenza, ikakhulukazi kubantu asebekhulile neziguli ezingaboni kahle nokuzwa, ukunyakaza kwezitho zomzimba - kubo kuzoba ukutholwa okungenamsebenzi. Ukwenza lula ukulinganiswa kwengcindezi yegazi, amanye amamodeli afaka i-cuff ekhanda eyakhelwe ngaphakathi yocingo kanye ne-supercharger ene-manometer ngendlela ehlanganisiwe. Ngalesi sizathu, i-sphygmomanometer isengathengwa ukuze isetshenziswe ekhaya.
Uma kuqhathaniswa nedivaysi esebenza ngomshini, inokuhlukahluka okuningi, kodwa inokufana okuningi ngedivaysi ezenzakalelayo. Ngentengo, idivayisi ye-semi-automatic iphakathi nendawo phakathi kwezinye izinhlobo ezimbili. Ngokuthengisiwe ungathola inqwaba yemikhiqizo esezingeni eliphezulu nehlala isikhathi eside yalolu hlobo, phakathi kokutholwa okudumile okuningi:
Omron S1. Iyunithi lamaJapan elihlangene ehlombe, umjovo womoya lapho wenziwa khona ngenxa yesibazi senjoloba. Imiphumela iboniswa kwisibonisi esibonisa imigqa emithathu. Kunememori eyenzelwe ukugcina izilinganiso eziyi-14. Kuhlanganiswe nencwadi yokulungisa idatha. Idivayisi ifakwe isikhombisi esithumela isinali ekhanyayo esibukweni uma izinga lomfutho wegazi lingaphandle kwebanga elifanele. Amandla, udinga amabhethri ama-2, ayikho i-adaptha yenethiwekhi. Izindleko - 1450 k.
I-Omron M1 Compact. Idivaysi ye-Semi-automatic compact ehlombe, elula futhi kulula ukuyisebenzisa. Ilawulwa inkinobho eyodwa. Kukhona yonke imisebenzi edingekayo yokulinganisa okusheshayo nokunembile kwengcindezi yegazi. Umthamo wememori wenzelwe izilinganiso ezingama-20. Inikwa amandla amabhethri ama-4 AAA. Ayikho i-adaptha yenethiwekhi, ibiza 1640 p.
I-A & D UA-705. Idivayisi ehlombe enemisebenzi edingekayo yokulinganisa okunembile nokusheshayo kwengcindezi yegazi ekhaya. Kunenkomba ye-arrhythmia, inani elikhulayo lememori eligcina imiphumela yokugcina engama-30. Kudingeka ibhethri le-1 AA kuphela ekusebenzeni. Iwaranti yakhelwe iminyaka eyi-10, kepha ibiza ngaphezu kwama-analogues - 2100 p.
Idivaysi ye-Semiautomatic ngendlela efanayo inquma umfutho wegazi kanye nesilinganiso senhliziyo, kanye nokuzenzakalelayo. Isici esivelelayo ukuthi i-cuff kumele ifukazwe kuyo ngesandla, i.e. inhlamvu yerabha. Uhlu lwemisebenzi yabo eyengeziwe lunesizotha xaxa, kepha ngasikhathi sinye idivaysi inakho konke okudingekayo ukulinganisa ingcindezi.Abasebenzisi abaningi kanye nochwepheshe bakholelwa ukuthi idivaysi ye-semiautomatic enesethi eyisisekelo iyindlela engcono kakhulu yokusebenzisa ekhaya.
Enye yamamaminithi edivayisi yisidingo sokupompa ngesandla ngethanga, okungalungele abantu ababuthakathaka. Ngaphezu kwalokho, ukunemba kwemininingwane kuncike kushaja yebhethri - kungathintwa amathonya angaphandle. Okuhle kufaka:
ukulula kokusebenza ngokuqhathaniswa ne-analogue yemishini,
izindleko ezishibhile ngenxa yokuthi i-divaysi ayihlinzekanga ngemoto kagesi, njengomshini oyimodeli,
ukungabikho kwe-blower yomoya ezenzakalelayo kukuvumela ukuthi wonge imali ekuthengeni nasekushintshiselweni kwamabhethri, amabhethri.
Uma unombuzo wokuthi iyiphi i-tonometer enembayo kakhudlwana, cabanga ngemishini ezenzakalelayo kanye nenqubomgomo yomsebenzi wayo. Isici salolu hlobo lwedivayisi kanje: zonke izinyathelo zokulinganisa umfutho wegazi zenziwa ngokuzenzakalelayo. Imitha yokucindezela okuzenzakalelayo yavela ekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule. Umsebenzisi udinga kuphela ukubeka i-cuff ngokunembile kuye bese ucindezela izinkinobho ezifanele - khona-ke leyo divayisi izokwenza konke ngokwayo. Ukusebenza okwengeziwe kuyenza le nqubo ifundise ngokwengeziwe, kube lula.
I-A&D UA 668. Idivayisi inikwe amandla amabhethri nenethiwekhi, ilawulwa yinkinobho eyodwa, kunomsebenzi wokubala inani eliphakathi, isikrini se-LCD. Imemori yenzelwe amaseli angama-30. Akukho adaptha kit, kubiza 2189 p.
I-Microlife BP A2 eyisisekelo. Imodeli enesikrini se-LCD, amabhethri e-4 AA, amandla okuhlinzeka ngememori, inkumbulo enamaseli angama-30 nenkomba yokuhamba Kukhona isikali se-WHO kanye nenkomba ye-arrhasmia. Akubizi kakhulu - 2300 k. Asikho i-adaptha kit, okuyisibalo esibalulekile.
I-Beurer BM58. Imodeli enenkumbulo yabasebenzisi ababili namaseli angama-60. Kunesilinganiso se-WHO, amabhethri ama-4 afakiwe. Ingafunda inani eliphakathi layo yonke idatha egciniwe, izinkinobho zokulawula ukuthinta. Ukuxhumana nge-USB kungenzeka. Kuyabiza kakhulu kunama-analogues (3,700 p.) Futhi akukho adaptha yamandla wamamachi.
Ngosizo lwemoto oluhlanganiswe ku-casing yemoto, umoya uphahlwe ku-cuff ngokuzimela uqonde ezingeni elidingakalayo. Ukugcwalisa nge-elekthronikhi "ukuzwa" amathoni, ukudonsa, bese kukhombisa ukufundwa konke kubekiwe. Umshini uyakwazi ukukala umfutho wegazi hhayi ehlombe kuphela, kepha nasezandleni, emunweni. Yikuphi i-tonometer enembe ngokwedlulele kulokhu okuthathu okuvame kakhulu, futhi okokugcina kunembile.
Kungani ukukala umfutho wegazi?
Ukuhlaselwa yisifo senhliziyo, isifo sohlangothi, ukwehluleka kwezinso, ubumpumputhe bonke kungukuqala kwesifo segazi. Futhi kunendlela eyodwa kuphela yokugwema ubunzima obukhulu - ukugcina izinga elijwayelekile lomfutho wegazi ngemithi.
Iziguli ezinokweqile zidinga ukuqapha umfutho wegazi ekhaya ukuze uvikele ubungozi bezinkinga ezingakhona. Kubaluleke kakhulu ukukala umfutho wegazi endaweni ezolile ukuze uthole idatha enembile kunazo zonke.
Izinkomba zengcindezi zabantu abagulayo nabaphilile azithinteki kuphela ngenxa yangaphandle kanye nezifo ezahlukahlukene, ubudala nobulili zibaluleke kakhulu.
Ngokusho kwedatha ekhonjiswe etafuleni, umfutho wegazi wenyuka kanye nobudala futhi lokhu kujwayelekile, njengoba iminyaka yomzimba nezinguquko ezihlobene nobudala zenzeka eziphazamisa ukuphazamiseka.
Siyakukhumbuza!Amapharamitha akhonjiswe kutafula amanani aphakathi. Ukunquma ngqo izinga lokucindezela komuntu ngamunye, kufanele usebenzise njalo ukuqapha kwengcindezi yegazi lasekhaya le-Omron futhi uthintane nochwepheshe.
Izinhlobo zezinsimbi zokulinganisa ukucindezela komuntu
Isixhobo esilinganisa umfutho wegazi sibizwa ngokuthi yi-sphygmomanometer (tonometer). Amadivaysi anamuhla ahlukaniswa indlela yokulinganisa imingcele ye-arterial nendawo yokusetshenziswa kwe-cuff, ungawathenga ekhemisi noma ezitolo ezikhethekile zemishini yezokwelapha, umeluleki uzokusiza ukhethe imodeli efanelekile.
i-mercury - amapharamitha we-arterial enqunywe kusetshenziswa inani lekholomu ye-zebb,
okwenzekile - imiphumela yokulinganisa ibonakala ngokudayela ngomcibisholo,
othomathikhi nange-othomathikhi - amanani aboniswa ngenani lamanani esikrinini.
Izindlela eziphambili zokulungisa imitha yengcindezi - emunweni, esihlakaleni nasehlombe, ama-cuffs kunoma yikuphi ukuhlanganiswa angaba nobude obuhlukile.
Uma unombuzo wokuthi imiphi imikhawulo enembile ngokwengeziwe, hlola ubuhle nezimpawu zedivayisi. Izinzuzo zedivayisi ezenzakalelayo:
kuqeda isidingo sokupompa umoya ngesandla,
ukusebenza okulula, ukusetshenziswa kalula,
amamodeli abizayo afakelwe ukusebenza okunothile, ngokwesibonelo, kungaba ngamadivayisi we-digital smart nge-ukuvumelanisa nge-smartphone, kulondolozwa umlando wokulinganisa.
Uma idivaysi ilula, iyathembeka futhi ihlala isikhathi eside. Ngomqondo, idivaysi ezenzakalelayo ayithathwa njengokukhetha okuhle kakhulu:
Impilo yenkonzo ayide njengeyedivayisi ye-semiautomatic. Le moto kagesi inikwa amandla amabhethri abuthakathaka, okushaja kwayo kudliwa ngokushesha, ngakho-ke kusebenza ngokomkhawulo wamakhono ayo futhi iphume ngokushesha.
Kubiza kakhulu. Ukugcwaliswa nge-elekthronikhi kuyabiza, futhi ukusebenza okwengeziwe kuphakamisa izindleko zokukhiqizwa nangaphezulu.
I-automata, eyenzelwe ukukala izinkomba esihlakaleni nasemunweni, inokuqonda okuncane kakhulu.
Isilinganiso sabaqaphi begazi abanembe kakhulu
Ukwelashwa kwe-hypertension ye-arterial hypertension (umfutho wegazi ophakeme) kanye ne-prehypertension (umngcele ngaphakathi kwe-129-130 / 80-89 mm Hg), kufanele wazi ukuthi iyiphi i-tonometer enembile futhi ithembekile. Imakethe igcwele inani elikhulu lezinto ezinikezwayo: amanye amamodeli anesilinganiso esinejubane elikhulu ngenxa yendlela engaboli, eyesibili ifakwe nge-sensor position isikhundla sensor (APS) enesibonakaliso (umsindo, ukukhanya), ukusuka kwesithathu ungalanda idatha kwikhompyutha ngechweba le-USB, njll. Yikuphi i-tonometer enembile - ukubuyekezwa kwamamodeli amahle kakhulu:
Yini ama-talmeter e-zebus
Le divayisi yokulinganisa umfutho iyithuluzi elidala nelinembe kakhulu elisetshenziselwa ukunquma ukubalwa kwegazi. Isisekelo sokuklama igeji yokucindezela kwe-zebhulamu nezahlukaniso, iparele kanye ne-cuff.
Usebenzisa iparele, udinga ukupompa umoya ku-cuff, kuyilapho udinga ukulalela imisindo yenhliziyo nge-stethoscope noma ifonetiki. Amapharamitha we-arterial anqunywa ngokuya ngokunyuka kwezinga le-mercury.
Abaqaphi begazi lomfutho we-Mercury banembe kakhulu
Uhlobo lwedivaysi ethandwa kakhulu yokunquma amanani wegazi anomfutho inesilinganiso esifanelekile sokunemba, ikhwalithi nentengo.
Ukwakheka kwedivayisi kufaka ama-cuffs, amashubhu enziwe ngerabha, lapho kufakwa khona iparele, ifonetiki, umfutho wokucindezela oyindilinga ngokuma kwedijithali. Izindleko ze-tonometer esebenza ngomshini yi-700-1700 rub., Intengo iyahlukahluka kumqambi.
Umshini wokubheka umfutho wegazi we-mehendi uqapha kakhulu umfutho wegazi odumile.
Ungalinganisa kanjani ingcindezi nge-tonometer ye-mehendi:
Ukunquma izinkomba zokucindezela kwegazi, thatha isikhundla sokuhlala ntofontofo - ingemuva kufanele libe nokusekelwa, imilenze akufanele iwele.
Izilinganiso zivame ukwenziwa ngesandla esisebenzayo, lapho kunezinkinga ezinkulu zenhliziyo nemithambo yegazi, ingcindezi kufanele ilinganiswe ezandleni zombili.
Isandla kufanele sibe phezu kobuso obucaba, umphimbo kufanele ubekwe ezingeni elifanayo ngomugqa wenhliziyo.
Bopha i-cuff 4-5 cm ngaphezulu komugqa we-elbow bend.
Faka isicelo se-stethoscope ngaphezulu kwangaphakathi kwe-elbow bend - kule ndawo imisindo yenhliziyo izwakala kakhulu.
Ngokunyakaza okulinganiselwe, thinta umoya ku-cuff usebenzisa iparele - i-tonometer kufanele ibe ngaphakathi kwama-200-220 mm Hg. Ubuciko. Iziguli ezinomfutho wegazi ophakeme zingamphoqa i-cuff ngaphezulu.
Umoya onopha kancane, kufanele uphume nge-cuff ngejubane le-3 mm / sec. Lalelisisa imisindo yenhliziyo.
Ukushaywa kokuqala kuhambelana nezinkomba ze-systolic (ephezulu). Lapho ukushaywa kwehla ngokuphelele, amanani e-diastolic (aphansi) ayaqoshwa.
Kunconywa ukuba kwenziwe izilinganiso ezi-2-3 ngesikhala semizuzu emihlanu - inani elijwayelekile libonisa kahle izinkomba zeqiniso zokucindezela kwegazi.
Abaqaphi bemithambo yegazi egazini othomathikhi
Umklamo awufani neze nedivayisi esetshenziswayo, kepha izinkomba zikhonjiswa kubhodi yesikolo kagesi, cishe kuwo wonke amamodeli, hhayi ingcindezi kuphela, kepha futhi namanani we-pulse akhonjiswa esikrinini.
Izinkomba ku-ton-automatic tonometer ziboniswa esikrinini se-elekthronikhi
Njengemisebenzi eyengeziwe, i-tonometer ingafakelwa i-backlight, isaziso sezwi, imemori yezilinganiso eziningana, kwamanye amamodeli amanani aphakathi ezilinganiso ezintathu abalwa ngokuzenzakalela. Izindleko ezijwayelekile ngama-ruble ayi-1 ,-2,2.3.
Amathoni abekwe esihlakaleni awanconywa kubantu asebekhulile - ngemuva kweminyaka engama-40, izikebhe ezikule ndawo zivame ukuhlaselwa yi-atherossteosis.
Abaqaphi bezomfutho wegazi abazenzakalelayo
Amadivayisi anamuhla, athuthukisiwe kwezobuchwepheshe, kepha izindleko zawo ziphakeme impela. Yonke inqubo yenzeka ngokuzenzakalelayo, awudingi ukushaya umoya ngeparele, elilungele kakhulu abantu abaneminyaka yobudala. Umklamo uqukethe i-cuff, ibhulokhi enombukiso wedijithali, ishubhu exhuma zombili izingxenye zedivayisi.
Ukuqapha umfutho wegazi othomathikhi - ithuluzi eliphambili kakhulu lokulinganisa ingcindezi
Inqubo yokulinganisa ilula - faka i-cuff, cindezela inkinobho, linda imizuzwana embalwa. Isikrini sibonisa umfutho wegazi, ukushaya kwenhliziyo. Amamodeli amaningi afakwe izinkomba ezisabela kuma-arrhythmias wesikhundla somzimba okungajwayelekile, ukunyakaza kwinqubo yokulinganisa. Izindleko zamamodeli weklasi lomnotho ama-ruble ayi-1.5-2. intengo yabaqaphi be-othomathikhi be-othomathikhi be-othomathikhi abangafinyelela kuma-ruble ayizinkulungwane ezingama-4,5.
Ukubuyekezwa kweziqaphi zokucindezela kwegazi okuhamba phambili
Abakhiqizi abahle kakhulu bezingcezu zokulinganisa ama-arterial indices yi-Microlife, A&D, Omron. Yenza ukukhetha okuhle kuzosiza isithombe nezimpawu eziphambili zamadivayisi.
Ama-tonometer amahle kakhulu:
IMicrolife BP AG 1-30 iyitonometer ehamba phambili yamaSwitzerland. Abasebenzisi bayibona kalula ukusetshenziswa, ukuthembeka, ukuqina. Isibonisi silula, eliphakathi kwe lithambile futhi likhululekile, idivaysi ibala ngokuzenzakalela inani eliphakathi lezilinganiso ezintathu, ingaxhunywa kwikhompyutha. Izindleko - ama-ruble ayizinkulungwane eziyi-1,1-1,2.
I-Microlife BP AG 1-30 - imishini ephezulu yegazi yokuqapha umfutho wegazi ovela eSwitzerland
U-Omron S1 - Isibonelo Esilungile Semi-Automatic
Kunye ne-UA 777 ACL - okuqapha umfutho wegazi othomathikhi ongcono kakhulu
“Sine-hypertension - isifo esiyifa, ngakho ngikwazi ukusebenzisa i-tonometer kusukela ngisemncane. Muva nje, esikhundleni sedivaysi evamile yokusebenza, ngithenge i-othomathikhi ku-Omron. Ijabule kakhulu - inqubo yokulinganisa ingcindezi yansuku zonke seyibe lula kakhulu. "
"Ngabona umngani wami weMicrolife tonometer automatic, enhle kangaka, kunemisebenzi eminingi. Kepha uthathe isinqumo sokuyivivinya ekuqaleni, wayithatha imali esejwayelekile kumama wakhe, kaningana walinganisa ingcindezi ngawo womabili amadivaysi - i-othomathikhi ihlala kumayunithi ayi-10-15. ”
"Basungule zonke izinhlobo zokuqapha kwegazi okuzenzakalelayo; akaziwa ukuthi kungani. "Sekuphele iminyaka engaba ngu-30 ngisebenzisa isalukazi sami njengoba bekujwayelekile, ekuqaleni bekungjwayelekile, kepha manje angilingani nodokotela."
I-tonometer isiza ukunquma izinkomba ze-systolic ne-diastolic ekhaya, okubalulekile ezifweni eziningi. Amadivaysi emishini abonakala ngokunemba okuphezulu nentengo ephansi, kepha akuwona wonke umuntu ongayisebenzisa. Sebenzisa amadivaysi othomathikhi kulula, kepha izindleko zawo ziphakeme impela.
(5 izilinganiso, isilinganiso 4,40 kwezingu-5)
Kungani udinga ukukala umfutho wegazi?
Imingcele yokucindezela yomuntu ngamunye imuntu ngamunye. Zingashiyana ngokujwayelekile ngamayunithi angama-5-10, futhi ngasikhathi sinye, impilo izohamba kahle. Kepha kunezici ezibangela "ukugxuma" ingcindezi. Kulokhu, umuntu ukhononda nge-malaise, ikhanda, ukulahleka kokuzwa kanye nokukhubazeka okubukwayo. Ukuqina kwengcindezi kuholela emthwalweni owandayo ku-myocardium. Inhliziyo isebenza ngemodi ethuthukisiwe, ebangela ubuhlungu, i-tachycardia, kanye nokunye ukuqhubeka kwesifo - ukuhluleka kwenhliziyo, i-hypricrophy ye-ventricular yesobunxele.
Ezimweni eziningi, umfutho wegazi ophakeme yi-asymptomatic. Iziguli ezinengqondo zingase zibe nakho:
Ubuhlungu enhliziyweni nentamo.
Ukwenza ukuxilongwa okufanele, udinga ukusebenzisa i-tonometer futhi ulinganise ingcindezi. Lezi zimpawu azinakwa. Isimo sengqondo sokunganaki empilweni yakho siholela ezinkingeni ngesimo somfutho wegazi ophakeme, ukushaya kwenhliziyo, nokushayeka kwengqondo ebuchosheni.
Kwezinye izimo, i-hypotension ingaba yingozi empilweni. Amanani omfutho aphansi aholela ekungondleki kahle ebuchosheni. Lokhu kungenxa yephimbo elincishisiwe lemikhumbi.
Kubalulekile!Ukulinganiswa kwengcindezi yegazi kwenziwa ngokuzihlola. Udinga ukuthola imingcele yokucindezela ekuseni nakusihlwa ukuze uvikele ukweqisa izinombolo ngesikhathi sokuphuza umuthi, ngoba kungalesi sikhathi lapho “ukugxuma” komfutho wegazi kuvame ukubonwa khona.
Imaphi amadivaysi asetshenziselwa ukukala umfutho wegazi?
Kunezinhlobo eziningi zeziqaphi zokucindezela kwegazi ezisetshenziselwa ukunquma ithoni ye-vascular. Ziyahlukahluka esikhundleni sokugqagqana:
Okucacile kakhulu yisixhobo sehlombe. Ihlelwe ngokuqinile futhi izala izinombolo eduze ngangokunokwenzeka ekucindezelweni okungokoqobo. Imodeli elula kakhulu yedivayisi ene-stethoscope eyakhelwe ku-cuff. Bakhululeka ukuyisebenzisa bebodwa, abadingi ukubamba ucingo, banakekele ukuthi itholakala ngokufanele. Inqubo ayidingi amakhono akhethekile futhi ungayenza ngaphandle kosizo lwangaphandle. Izinhlobo ezaziwayo zokuqapha izingcindezi zegazi ezivela ku-Little Doctor zingama-phonendoscopes, ama-inhalers neminye imishini yezokwelapha.
I-carpal tonometer ayinembile njengemodeli edlule. Izinkomba zayo zincike indawo ngokusho kwepulse. Uphendula kunoma yisiphi isikhundla esingalungile sesandla. Kunokungafani okubalulekile phakathi kokukhishwayo kanye nemingcele eqondile yengcindezi yegazi. Kungashiwo okufanayo ngemodeli yensiza "emunweni." Ukuhlanekezela kwezinkomba kuncike hhayi kuphela endaweni yebhulashi, kepha futhi nasezingeni lokushisa leminwe. Lapho kubanda isandla, kwehlisa ingcindezi.
Ngohlobo lomsebenzi, ama-tonometer ahlukaniswe:
Amamodeli wedijithali anesihenqo lapho kuboniswa khona imiphumela yokulinganisa. Amadivaysi emishini afakelwe i-manometer enomcibisholo futhi umuntu ngokwakhe ulungisa izinkomba. Amadivaysi kagesi alungele ukusetshenziswa. Kunconyelwa iziguli esezikhulile, "ama-novices" angazi ukuthi angalinganiswa kanjani kahle ngamamodeli we-mehendi, kanye nabantu abanokuzwa okumbalwa nombono. Ukuze idivaysi isebenze isikhathi eside, qaphela izimo zokugcina:
gcina insimbi isendaweni eyomile
shintsha amabhethri ngesikhathi (amafomu kagesi),
qiniseka ukuthi amashubhu awaguqi lapho egcina ucingo,
Baqinisekisa ukuthi idivaysi ayiwe ezandleni zengane, ngoba banelukuluku futhi bangalimaza idivaysi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngohlobo lwe-semi-automatic and othomathikhi lwamadivayisi wokulinganisa, ngoba ukulimala okuncane kuholela ekunikezelweni kwezinombolo ezingalungile.
Umqaphi wegazi wokuqapha
Lolu hlobo lwe-tonometer lwenza ukukalwa lodwa. Isiguli sidinga kuphela ukufaka i-cuff bese sivule inkinobho ethi "qala". Ukujova komoya kwenzeka ngendlela ye-compressor. Zonke izinkomba zikhonjiswa esikrinini. Lapho kutholakala i-cuff, ahlukaniswe amahlombe nokushaywa ngamandla, futhi ngokuya ngomgomo wokusebenza - ku-othomathikhi nakwezokuzenzakalelayo. Uhlobo lwedrayivu lwedivayisi luqonde ngqo kubhulashi kusuka ngaphakathi.
Amadivaysi kagesi afakwe inkumbulo erekhoda ukufundwa kwezilinganiso ezi-2-3 futhi iveze inani eliphakathi. Izinhlobo ezisezingeni eliphakeme zinomsebenzi we-antiarrhythmic. Uma isiguli sine-arrhythmia, khona-ke kunzima ukukala kahle ingcindezi.Amadivayisi analo msebenzi akhombisa izibalo zengcindezi yangempela kucatshangelwa ama-arrhythmias futhi abonisa okubhalwe esikrinini okubonisa ukuthi isiguli sinamandla okushaya okungazinzi.
Umqaphi wegazi othomathikhi
Lolu hlobo lwama-tonometer lungalinganisa kalula ingcindezi ngokwalo, aludingi amakhono athile, lawula isikhundla se-stethoscope ne-cuff. Ngesikhathi sokulinganiswa kwengcindezi, isiguli singalala phansi uma kunzima kuso ukuba sesimweni sokuhlala. Lokhu akuphazamisi ikhwalithi yokulinganisa. Amandla avela ngamabhethri noma amameyili.
Amadivaysi anjalo ahlelwe esihlakaleni kanti i-pulsation iqoshwa emthanjeni we-radial. Ukunemba kwensiza enjalo kuphansi kunokwe-brachial, ngoba ububanzi be-radial artery mncane futhi kunzima kakhulu ukulalela amathoni. Kunconywa abaqaphi bezingcindezi begazi le-Wrist ukuze abasubathi baqophe izinga lokucindezela ngesikhathi sokuqeqeshwa. Ama-tonometer anjalo awanconywa kwiziguli ezinogqinsi oluqinile noma i-arrhythmia ngenxa yokunemba okuphansi kwezinkomba. Kungcono ukusebenzisa amamodeli amahlombe.
Yikuphi i-tonometer okungcono
Lapho ukhetha i-tonometer, isiguli ngasinye siqondiswa imibandela yaso. Izingqapheli zokucindezela kwegazi okuzenzakalelayo nezingena-othomathikhi ziyasebenza futhi kulula ukuzisebenzisa, kepha zibiza ngaphezu kwezomishini. Lapho ukhetha amadivaysi e-elekthronikhi, udinga ukunaka umkhiqizi futhi unikeze ukukhetha kumikhiqizo eyaziwayo enikeza insiza yesiqinisekiso. Qiniseka ukuthi isibuko sikhanya futhi nezinombolo ezikhonjisiwe zicacile.
Bheka ukuthi idivaysi lenza yonke imisebenzi echazwe emiyalweni. Uma uthenga i-elektroniki, kubalulekile ukuzama i-cuff, ikakhulukazi kubantu abakhuluphele. Kumamodeli ahlukile, inobude obuhlukile futhi kuyadingeka ukuthi ubambe isandla sakhe kahle futhi uzinze ngokuphephile neVelcro.
Lapho uthenga i-elektroniki yegazi yokuqapha, naka usayizi wesibuko. Kufanele kube kukhulu ukuze abantu abanombono ophansi noma ukuthi asebekhulile bangasibona kahle isithombe. Izinhlobo ezintsha zamadivayisi zifakwe eminye imisebenzi:
isinali yomsindo phambi kwe-arrhythmia,
ukulondolozwa kwedatha ezilinganisweni zangaphambilini,
amandla okuphrinta idatha yokulinganisa.
Iziguli ezinamazinga wesithathu we-hypertension ezisengozini yokuhlaselwa yisifo senhliziyo zingathenga i-defibrillator ephathekayo. Kuzosiza ukufeza izindlela zokuvuselela kanye nendlela yokuphefumula okwenziwe ngokufakelwa. Inkomba yokusetshenziswa kwensiza ukuboshwa kwenhliziyo.
Amamodeli we-mehendi ane-stethoscope eyakhelwe ngaphakathi neparele eliseduzane ne-manometer anikeza ukufundwa okunembayo. Zenzelwe iziguli "ezinolwazi" ezinamakhono amahle okuzwa, umbono kanye nokukala. Ama-tonometer anjalo abiza kakhulu.
Emakethe yezokwelapha, kunikezwa amathuluzi wokulinganisa wokuthola ingcindezi yamafemu ahlukahlukene namamodeli. Ngakho-ke, kulula kumthengi ukukhetha i-tonometer ehlangabezana nezidingo zomuntu ngamunye. Umuntu ngamunye, ekhetha i-tonometer, unaka intengo nokusebenza kwensiza, kanye nokusebenziseka kalula. Udonsela ukunaka ewaranti yomenzi, akhethe imikhiqizo eyaziwayo. Ngaphambi kokuthenga, udinga ukubonana nodokotela wezinhliziyo futhi uthole izeluleko ezifanele mayelana nokukhethwa kwe-tonometer.
Izinhlobo zokuqapha umfutho wegazi
Isixhobo sokulinganisa umfutho wegazi ngaphandle kokungena emthanjeni sibizwa ngokuthi yi-tonometer (ngokuqondile, i-sphygmomanometer). Izakhi zalo ezihlanganisiwe yi-cuff kanye ne-blow blow yomoya.
Ukuba khona kwezinye izinto kuya ngohlobo lokwakhiwa. Ukungena ngaphakathi kwe-artery (indlela ehlaselayo) kusetshenziselwa ukubheka njalo isimo seziguli ezinzima esibhedlela. Ama-Tonometer eza ngezinhlobo ezine:
I-Mercury - amadivayisi wokulinganisa ingcindezi wokuqala,
I-othomathikhi (nge-elekthronikhi) - yesimanje kakhulu futhi ethandwa kakhulu.
Isimiso sokusebenza kwezinhlobo ezahlukahlukene zama-tonometer ziyefana: ehlombe, ngaphezu kwesondo, kufakwa i-cuff enegumbi elikhethekile le-pneumatic lapho kuphunyelwa khona umoya. Ngemuva kokudala ingcindezi eyanele ku-cuff, i-valve yemvelaphi iyavuleka futhi inqubo yokuvuselela (ukulalela) yemisindo yenhliziyo iyaqala.
Kungani igazi ligijimela ekhaleni ngaphansi kwengcindezi? - funda le ndatshana.
Nakhu ukwahluka okuyisisekelo ekusebenzeni kwama-tonometer: i-mercury nesidingo sokwenza mehendi ukulalela imisindo yenhliziyo isebenzisa ifonimfomu. Abaqaphi bezingcindezi be-Semi-automatic and othomathikhi banquma izinga lokucindezela ngokuzimela.
Abaqaphi begazi lomfutho we-Mercury
Yize i-mercury tonometer ngokwayo isiphume isikhathi eside ekusebenziseni ngobuningi, ukubonwa kwamadivayisi amasha kwenziwa ngokunembile yimiphumela yokulinganisa kwayo. Ama-Mercury tonometer asakhiqizwa futhi asetshenziswa ocwaningweni oluyisisekelo, ngoba iphutha ekulinganiseni umfutho wegazi lincane - alidluli ku-3 mmHg.
Okusho ukuthi, i-talmeter ye-mercury yiyona enembile kunazo zonke. Kungakho amamilimitha e-mercury eseyiyunithi yengcindezi.
Esimweni seplastiki, isilinganiso sokulinganisa sisuka ku-0 siye ku-260 sinamatheliswe engxenyeni mpo ngentengo yokuhlukanisa engu-1 mm. Maphakathi esikalini kukhona ishubhu yengilazi esobala (ikholomu). Phansi kwekholomu kunesichibi se-zebus exhunywe kwi-hose ye-bulb yokukhuphukela.
Ihose lesibili lixhumanisa isikhwama sokubhoboza i-cuff. Izinga le-mercury ekuqaleni kwesilinganiso sokucindezela kufanele lakhiwe ngokuqinile ku-0 - lokhu kuqinisekisa izinkomba ezinembayo kakhulu. Lapho kufakwa umoya, ingcindezi ku-cuff iyanda, bese kukhuphuka i-mercury ekholamu.
Ngemuva kwalokho kufakwa ulwelwesi lwe-phonendoscope ku-elbow bend, inqubo ye-trigger yethanga iyavulwa bese kuqala isigaba sokuthokozisa.
Kuzwakala amathoni okuqala we-systolic - ingcindezi emithanjeni ngesikhathi sokuqothuka kwenhliziyo. Okwamanje "ukungqongqoza" kuqala, ingcindezi ephezulu iyanqunywa. Lapho "ongqongqozayo" eyeka, ingcindezi ephansi ngesikhathi se-diastole (ukuphumula kwenhliziyo nokugcwalisa ama-ventricle ngegazi) kunqunywa.
Ungayisebenzisa kanjani i-tonometer?
Wonke umuntu okungenani kanye empilweni yabo kwadingeka abhekane nezindlela zokucindezela. Ngaphezu kwalokho, yaziwa kakhulu ezigulini ezinomfutho wegazi ophakeme. Kepha ungalinganisa kanjani ingcindezi ngokwakho?
Kunikezwe izincomo ezijwayelekile. Uma inqubo yaphindwa kaningi ezandleni zombili, futhi umehluko ngezinombolo wawungaphezu kwe-10 mm RT. Njengoba kuyadingeka ukuphinda ukukala izikhathi eziningana isikhathi ngasinye, ukuqopha imiphumela. Ngemuva kwesonto lokubheka futhi ukungahambelani njalo kwe-10 mm Hg, udinga ukubona udokotela.
Manje cabanga ukulandelana kwezenzo lapho ukala ingcindezi.
Beka i-cuff yakho ehlombe noma esihlakaleni. Eziqaphelweni zanamuhla zokucindezela kwegazi kunamathiphu ngqo ku-cuff, akhombisa ngokusobala ukuthi kufanele atholakale kanjani. Okwehlombe - ngenhla komshudo, kunamacwecwe ezansi kusuka ngaphakathi kwengalo. Inzwa ye-tonometer ye-othomathikhi noma inhloko ye-phonendoscope esimweni somshini kufanele ibe lapho izwa khona.
I-cuff kufanele ikhiywe ngokuqinile, kepha hhayi ukugoqa ingalo. Uma usebenzisa i-phonendoscope - yisikhathi sokuyibeka bese unamathisela ulwelwesi endaweni ekhethiwe.
Ingalo kufanele ifane nomzimba, cishe ezingeni lesifuba se-tonometer ehlombe. Ukuze isihlakala - izandla zicindezelwe ngakwesokunxele sesifuba, endaweni yenhliziyo.
Kwabaqaphi bezomfutho wegazi othomathikhi, yonke into ilula - cindezela inkinobho yokuqala bese ulindela umphumela. Okwe-semi-automatic and mechanical - qinisa i-valve ye-shutter bese unamathisela i-cuff ngomoya ukufika ezingeni le-220-230 mm Hg.
Vula kancane i-valve yokuvula, ukhiphe umoya ngesilinganiso sokuhlukaniswa okungu-3-4 (umzuzwana) ngomzuzwana. Lalelisisa amathoni. Umzuzu lapho "ukungqongqoza ezindlebeni" kuvela kuzodinga ukulungiswa, khumbula inombolo. Lokhu ukucindezela okuphezulu (i-systolic).
Inkomba yengcindezi ephansi (diastolic) ukuqedwa kwe- "knock". Leli yidijithi yesibili.
Uma uthatha isilinganiso sesibili, shintsha ingalo yakho noma uthathe ikhefu imizuzu emi-5 ukuya kwengama-5.
Ungalinganisa kanjani ingcindezi?
Ngisho nomqaphi wegazi onembe kunabo bonke uzonikeza imiphumela engalungile uma umfutho ungalinganiswa kahle. Kunemithetho ejwayelekile yokulinganisa ingcindezi:
Isimo sokuphumula. Udinga ukuhlala isikhashana (imizuzu engu-5 yanele) endaweni lapho kufanele khona ukukala umfutho: etafuleni, kusofa, embhedeni. Ingcindezi iyaguquka njalo, futhi uma uqala ulala embhedeni, bese uhlala phansi etafuleni ulinganise ingcindezi, umphumela uyoba ungalungile. Ngesikhathi sokunyuka, ingcindezi yashintsha.
Izilinganiso ezi-3 zithathwa, kuguqulwa izandla ngamunye ngamunye. Awukwazi ukuthatha isilinganiso sesibili engalweni eyodwa: izikebhe ziyabhintwa futhi kuthatha isikhathi (imizuzu emi-3-5) ukwenza ukunikezwa kwegazi kube ngokwejwayelekile.
Uma i-tonometer ingemishini, khona-ke ikhanda le-phonendoscope kumele lisetshenziswe kahle. Ngaphezulu nje kwe-elbow, indawo ye-pulsation enzima kakhulu inqunywa. Ukubeka ikhanda lophonendoscope kuthinta kakhulu ukuzwakala kwemisindo yenhliziyo, ikakhulukazi uma ziyisithulu.
Idivayisi kufanele ibe sezingeni lemfumba, nesandla - endaweni eqondile.
Okuningi kuncike kwi-cuff. Kufanele isabalalise kahle umoya egumbini le-pneumatic futhi ibe nobude obufanele. Ubukhulu be-Cuff buboniswa ubuncane nobukhulu be-girth ehlombe. Ubude obuncane be-cuff bulingana nobude bekamelo lawo wepneumatic.
Uma i-cuff yinde kakhulu, igumbi le-pneumatic liyozimboza, linciphise isandla kakhulu. I-cuff efushane kakhulu ayikwazi ukudala ingcindezi eyanele ukukala ingcindezi.
Uhlobo lweCuff Ubude cm
Okwezingane ezisanda kuzalwa 7–12
Okwezingane 15–22 18–26
Okujwayelekile 22–32 25–40
Okukhulu 32–42 34–51
Ithebula lezinkomba ezijwayelekile
Umuntu ngamunye, ngokuya ngezici eziningi, athuthukisa ingcindezi yakhe yokusebenza, kungumuntu ngamunye. Umkhawulo ophezulu wesilinganiso yi-135/85 mm RT. Ubuciko. Umkhawulo ophansi ngu-95/55 mm Hg. Ubuciko.
Ingcindezi incike kakhulu eminyakeni yobudala, ubulili, ukuphakama, isisindo, izifo nemithi.
Izinto ezijwayelekile zamathuluzi wokulinganisa ingcindezi
Izakhi ezisemqoka zamamitha wegazi we-mehendi ne-othomathikhi:
ingcindezi yokucindezela ngesilinganiso / ukubheka kwe-elekthroniki,
i-cuff ehlombe (igumbi lomoya ku-sleeve "lendwangu" elungisa i-Velcro),
isibani senjoloba esine-valve yokuphuma kwegazi ephoqelelwe yokuphoqa umoya ukungena ku-cuff,
amashubhu enjoloba wokuhambisa umoya.
Izakhi eziphambili zamamitha wegazi othomathikhi:
iyunithi ye-elekthronikhi enombukiso,
i-cuff ehlombe noma esihlakaleni (igumbi lomoya elisesitsheni "sendwangu" eneziqeshana zeVelcro),
Amabhethri wohlobo lwe-AA (uhlobo lomunwe) noma uhlobo lwe-AAA (pinky);
Idivaysi elenzelwa ukukala umfutho wegazi lithwele leli gama, ngoba likuvumela ukukala ingcindezi, noma ngabe kunezici zangaphandle. Into esemqoka ukuthi umuntu wakwazi ukudonsa i-cuff futhi ahlole umphumela. Le mishini iqukethe i-cuff yokulinganisa umfutho wegazi, i-manometer (yokulinganisa umfutho womoya ngaphakathi kwe-cuff) neparele.
Kusetshenziswa into esetshenziselwa indlela yokulinganisa umfutho wegazi (futhi okubizwa ngokuthi yi-sphygmomanometer) ngokulandelayo:
Ama-cuffs okulinganisa umfutho wegazi afakwa engalweni, phezulu ngangokunokwenzeka ehlombe futhi amiswe nge-Velcro ekhethekile.
Kufakwa i-phonendoscope ezindlebeni, efana nedivaysi yokwelapha eklanyelwe ukulalela isifuba. Omunye umkhawulo wawo ubekwa ngaphakathi komphetho we-elbow futhi ucindezelwe kancane.
Okulandelayo, i-cuff yengalo iyakhuphuka kusetshenziswa ipharele. Kungemva kwalapho kuphela imiphumela nokuhlolwa kwengcindezi yegazi kufinyeziwe.
Ukwazi imiphumela eqondile ye-intravascular, udinga ukubeka ingcindezi yokulinganisa ngaphambi kwakho, bese uphonsa i-pearl kuze kube yilapho ishayela liyeka ukulalela i-phonendoscope. Lapho-ke kufanele uthole isondo elincane eliphakathi kwethanga bese ulikokotela. Ngenxa yalokhu, i-cuff yokulinganisa izokwehla kancane, futhi umuntu uzodinga ukulalelisisa i-phonendoscope.
Okwamanje lapho idivaysi yokulinganisa umfutho wegazi iqala ukudonsa kakhulu ezindlebeni - izokhombisa imiphumela yezinkomba ze-systolic, futhi ukuthi yiziphi izindinganiso ezokwehlisa - ikhuluma nge-diastolic.
Ngokuvamile, le yithuluzi lokulinganisa ingcindezi elithandwa kakhulu, kepha idinga amakhono akhethekile nolwazi okungeyona yonke isiguli esinayo. Ama-tonometer anjalo asetshenziswa njalo emitholampilo.
Esikhathini sokuthatha umhlalaphansi, ukulinganisa umfutho wegazi ngomshini okwenziwa ngawo (ngaphandle kosizo lwangaphandle) kuba nzima ngokwengeziwe. Uma umuntu engakaze ahlangane nemishini enjalo phambilini, angaqondi ukuthi ungumsebenzi onjani, khona-ke akakwazi ukuthi afunde ukufunda ngokuzimela ulwazi oluvela kumanometer esikhulile. Futhi ekwaluphaleni, ukuzwa kuqala ukuba buthaka - lesi yisizathu sesibili esenza ukuthi le ndlela yokucwaninga ibuye ingatholakali kubantu beminyaka yobudala.
Ngenxa yalokho, ukuze kukalwe njalo ingcindezi kumuntu osekhulile nge-tonometer yemishini, usizo lwezihlobo luyadingeka. Uma kwenzeka impesheni ingenazo izindlalifa noma zingamvakashela, kunconywa ukusebenzisa amadivaysi ehlukile athuthukile.
Umshini wokubheka umfutho wegazi weMercury
Kukhona futhi nesibuko sokucindezela kwegazi esilinganisa umfutho wegazi nge-mercury. Esikhundleni se-manometer, ine-skrini ye-zebus, ekala ukucindezela komuntu (ahlole imiphumela). Njengoba kunikezwe ukubonakala kwamadivaysi athuthukisiwe, le mitha ayilungele ukusetshenziswa, ngoba ayinakuhanjiswa.
Eqinisweni, le mitha yokucindezela kwesandla (i-zebus ze-zebus) nayo inama-cuffs. Isebenza ngokufana ne-sphygmomanometer yesimanjemanje, kepha ukuze isetshenziswe umuntu kuzodingeka ukuthi ayohlala etafuleni abheke inzwa ye-zebus. Ngesikhathi sokuhlolwa komphumela, ikholomu ye-zebus izoba phambi kwamehlo, ngakho-ke ukufunda imininingwane ngeke kusixaka isiguli.
Ukuqapha umfutho wegazi we-Semi-othomathikhi kuyimishini eyenziwe lula evumela ukuthi wena ukukala ingcindezi yanoma yimuphi umuntu, ngaphandle kwemfundo nokuthuthuka kwengqondo. Amadivayisi we-Semi-automatic athengiswa emakhemisi ngenani elifanele. Ukuze usebenzise leyunithi, uzodinga:
Ukubeka ama-cuffs wokulinganisa, ukuphakama okuncane kune-elbow (eduze kwehlombe), kulungise.
Bese ucindezela inkinobho kwimishini.
Fakela ama-cuffs ukukala umfutho womoya ngesandla usebenzisa i-bulb.
Njengomphumela, ukukala ingcindezi yomuntu kuba lula kakhulu, ngoba umfutho wegazi othomathikhi wehlisa i-cuff uqobo futhi ukhombisa imiphumela eseqediwe.
Ukungathandeki kwalesi siqapha sokucindezela kwegazi yisidingo sokusebenzisa amabhethri noma ukuxhuma kumamayini (kuya ngomakhi owukhethayo nemodeli ye-tonometer). Amabhethri adinga izindleko ezingaguquki zezimali, kepha ngendlela ehlukile ucingo ngeke lusebenze, lapho-ke ukulawula okungaka kwamandla we-intravascular voltage kuyabiza ukuyisebenzisa. Lapho uthenga i-tonometer edinga ukuxhumana kwenethiwekhi, ukukala ingcindezi kumuntu ongaphandle kwekhaya ngeke kwenzeke.
Kodwa-ke, amanye amadivaysi wokulinganisa umfutho wegazi ane-adaptha ekhethekile ye-tonometer, ekuvumela ukuthi ushintshe amandla ukusuka kubhethri uye kumamains, okuphambene nalokho.
Ngenxa yale divayisi, ungalinganisa ingcindezi noma kuphi.
Idivaysi ezenzakalelayo ekala umfutho wegazi kubantu kulula ukuyisebenzisa, ngakho-ke ngisho nengane iyakwazi ukuyisebenzisa. Qedela ngale tonometer kungumyalo ochaza ukuthi unganquma kanjani umfutho wegazi.Futhi, kwezinye izingqapheli zokucindezela kwegazi kune-adaptha yokushintsha umsoco netafula elikhethekile elikutshela ukuthi ungathola kanjani ukuthi i-voltage ye-intravascular ishiye ibanga elijwayelekile.
Imisebenzi yokulinganisa yensiza enjalo ifaka amandla emishini yamadivaysi e-automatic, ngakho-ke yiyona olunembile kakhulu futhi ehamba phambili phakathi kwawo wonke amadivayisi afanayo. Le yunithi inama-cuffs wokulinganisa umfutho wegazi kanye nokuqapha kukagesi okuvumela ukukala ingcindezi ngokucindezela inkinobho eyodwa nje.
Lolu hlobo lwama-tonometer luhlukaniswe ngezinhlobonhlobo eziningana:
Akukhathalekile ukuthi ingcindezi ilinganiswa kanjani, okungukuthi, uluphi uhlobo lwedivaysi ezenzakalelayo. Inhloso yalowo nalowo kubo izwakala ngokufana - ukuhlinzeka ngemiphumela efanele. Noma yimuphi umshini we-othomathikhi we-elektroniki okala ingcindezi ngokuzimela upompa i-cuff ukukala umfutho womoya. Itholakala ehlombe, emunweni noma esihlakaleni (kuya ngokuthi ukhetha okokusebenza kwemishini yezokwelapha okwenzelwe ukulungisa amapharamitha we-intravascular). Okulandelayo, idivayisi yehlisa i-cuff, futhi ikhombisa isiguli umphumela ophelile.
Yilinye lalawa ma-tonometer line-adaptha yokuxhuma kumamayini, ngakho-ke, ngokuthenga la ma-gauges okucindezela, ungawasebenzisa bobabili ohambweni, ekhaya nasendaweni yokuphumula.
Ngomfutho wegazi ophakeme kanye ne-hypotension, ezinye izifo zohlelo lwezinhliziyo, ezibonakala ngokwanda kwengcindezi ye-intravascular, kungcono ukusebenzisa amadivaysi wokulinganisa umfutho wehlombe. Kulokhu, kukalwa imithambo emikhulu, ekuvumela ukuthi uthole umphumela onembile kunazo zonke izinhlobo zamamitha azenzakalelayo.
Umshini wokulinganisa ingcindezi esihlakaleni uvame ukusetshenziselwa ukulawula ukusebenza kohlelo lwe-vascular kubagazini. Umshini onjalo wokucindezela ubizwa ngokuthi isongo lokufaka umfutho wegazi ophezulu (noma i-hypotension, ngokuya ngezinkinga zesiguli).
Futhi, imitha yengcindezi yesandla ikuvumela ukuthi wenze isilinganiso sansuku zonke ukubheka ukuthi uhlelo lwe-vascular luziphatha kanjani usuku lonke (lapho usebenza kanzima futhi uphumula). Kunconywa ukuthi ungeze ingcindezi nge-tonometer ehlombe, ngoba kungahle kube nephutha elincane ocwaningweni.
Ukuze usebenzise isongo ngomfutho wokulinganisa, udinga ukufaka ama-cuffs esihlakaleni sakho, khetha imodi oyifunayo bese ulinda isikhashana ngenkathi idivaysi ilinganisa amanani entravascular. Uma kucatshangelwa ukuthi imitha yokucindezela kwe-wrist icompact futhi kulula ukuyisebenzisa, bavame ukukala umfutho wegazi kubantu abanokuzivocavoca okukhulu komzimba noma ukusebenza okuphezulu, okuvusa ukwanda kwengxabano ngaphakathi kwemithambo.
Ukuqapha umfutho wegazi wedijithali
Abaqaphi bomfutho wegazi abancane abafuneki kangako, ngoba ngisho nesilinganiso sokuqala nale divayisi singabonisa iphutha elikhulu. Lapho ingcindezi yomuntu ilinganiswa ngale ndlela, imikhumbi emincane yomunwe iyahlolwa. Ngenxa yalokho, kungahle kungabi nokuqina okwanele kokugeleza kwegazi endaweni yokutadisha, futhi imiphumela izoba yiphutha.
Idivaysi ezenzakalelayo noma eyizi-automatic yokukala ingcindezi esihlakaleni, umunwe noma ehlombe ine-adaptha yokuxhuma ugesi. Futhi, isiguli singalinganisa ngokuzimela ingcindezi bese silinda ukunqunywa kwamapharamitha we-intravascular, athole umphumela osuvele uqediwe. Lokhu kuyinzuzo evamile yokusebenzisa ngokucophelela abaqaphi besimanje begazi.
Iziphakamiso ze-Intravascular Measurement Technology
Akukhathalekile ukuthi ungalinganisa yiphi ingcindezi - nge-tonometer esebenza ngomshini noma othomathikhi, njengoba ithuluzi lokulinganisa umfutho womuntu libizwa ngokuthi: ihlombe, umunwe noma i-carpal. Kuzodingeka ukukala ukucindezelwa kwe-intravascular ngokunembile, ngaphandle kwalokho noma amadivaysi amahle kakhulu akhombisa umphumela oyiphutha.
Ukuhlola kwenziwa kwisibhengezo esingenalutho, ngoba isifiso sokuvakashela igumbi lokugezela senza ukucindezeka okungaphakathi emzimbeni.
Noma yini oyisebenzisayo, uzodinga isikhundla sokuhlala. Udinga ukuncika emuva kwesihlalo hhayi ukuwela imilenze yakho, kodwa uwabeke ngokuqinile phansi.
Izinsimbi zokulinganisa ingcindezi yomuntu, okungukuthi, ama-cuffs, afakwa ezandleni ezingenalutho ukuze izingubo zingadali ukuncipha okwengeziwe.
Ukuze uzivikele ekuqhubekekeni kwezifo ze-intravascular kwezifo, kufanele uthintane nochwepheshe futhi uthole ukuthi yiziphi izinyathelo ingcindezi yakho.
Lokhu kunciphisa ubungozi bezinkinga ngendlela yokuhlaselwa yisifo senhliziyo, unhlangothi kanye nesifo segazi. Isiguli kufanele siqaphe njalo isimo sayo sokuhlinzwa ukuze siqinisekise indlela efanelekile yokwelapha futhi ubuyisele imithambo yegazi kokujwayelekile.
Ungayikhetha kanjani i-tonometer efanele
Abantu abaningi banesifiso ngalesi sihloko, bathola i-tonometer yezihlobo zabo noma ukuzisebenzisela bona. Indlela elukhuni yokunquma ngokuthenga ukubonana nodokotela wakho. Uzokutshela: ukuthi ungayikhetha kanjani idivaysi enokunemba okuyikho, noma azosho ukuthi bakala kanjani ingcindezi emtholampilo wabo, ubani igama lomuthi wokulinganisa ingcindezi womuntu osetshenziswa ukuhlola iziguli.
Lokhu kuzokuvumela ukuthi ungenzi iphutha ngokuzikhethela, futhi uthole imiphumela efana nokuhlolwa ngokomzimba.
Kepha, uma ungafuni ukusebenzisa usizo lwabasebenzi bezokwelashwa, kufanele uqale kulawa ma-nuances alandelayo:
Imodeli nokuthandwa komenzi we-tonometer bakhuluma ngekhwalithi yezimpahla. Ithuluzi lokulinganisa ingcindezi esihlakaleni, ehlombe, noma emunweni kufanele lithengwe kubakhiqizi abahlolwa isikhathi.
Khetha kahle usayizi we-cuff. Iziziba zedivayisi ehlombe yilezi: ngaphansi kwama-22 cm., Futhi zifinyelela ku-45 cm. Uzodinga ukukala ama-biceps akho kusengaphambili, bese ucela ekhemisi ngesixhobo sokulinganisa umfutho wegazi nge-cuff efanelekile.
Ngaphambi kokuthenga, udinga ukuvula amathuluzi wokulinganisa, zama ukuhlola amanani wamanje we-intravascular. Uma izinhlamvu zincane kakhulu noma zimile, lokhu kungakhombisa ukusebenza kahle kwensiza. Ngemuva kokuthola umkhiqizo onjalo, kuzodingeka isheke lekhwalithi. Ngasikhathi sinye, amadivaysi wokulinganisa umfutho womuntu azothathwa ukuze ahlolwe, futhi ngalesi sikhathi ngeke ukwazi ukulawula impilo yakho futhi ungavumela ukuthathwa ngokweqile kwe-hypertonic / hypotonic.
Njengoba uthenge i-tonometer, ukuhlolwa kwezokwelashwa kutholakala kumuntu nganoma yisiphi isikhathi. Kodwa-ke, uzodinga ukuyinakekela ngokucophelela ukuze isebenze isikhathi eside ngangokunokwenzeka.
Ngakho-ke, uma ubhekene nokuphazamiseka kwe-intravascular, kuyadingeka ukuthenga i-tonometer, futhi uyisebenzise okungenani izikhathi ezi-5 ngosuku (ukugwema izinkinga). Ngokwezincomo ezingenhla zokukhetha idivaysi, ungathenga i-tonometer esezingeni eliphakeme. Kuzosiza ukulawula ukungezwani ngaphakathi kwemikhumbi iminyaka eminingi.
Imithombo elandelayo yolwazi isetshenziselwe ukulungisa lokho.
Umfutho wegazi ulinganiswa ngezindlela ezimbili:
I-Auscultatory (indlela kaKorotkov) - ilalela ukushaya ngephonendoscope. Indlela ijwayelekile kumadivayisi okwenziwa.
I-Oscillometric - umphumela ukhonjiswa ngokushesha esikrinini sedivayisi ezenzakalelayo.
Kodwa-ke, kuzo zombili lezi zimo, umgomo wokusebenza kwama-tonometer uyefana.
Ungayenza kanjani isilinganiso sokucindezela kwegazi?
Lapho ulinganisa ngamadivaysi e-mehendi, kufanele ulandele imiyalo:
Isilinganiso sokuqala senziwa ekuseni, isilinganiso sesibili noma sesithathu senziwa ntambama nakusihlwa (noma kusihlwa kuphela), amahora ama-1-2 ngemuva kokudla futhi kungabikho ngaphambi kwehora eli-1 ngemuva kokubhema noma ukuphuza ikhofi.
Kungcono ukuthatha izilinganiso ezi-2-2 bese ubala inani eliphakathi lokucindezela kwegazi.
Ukulinganisa kwenziwa kahle ngasesandleni esingasebenzi (ngakwesobunxele uma usunxele kwesokudla, nangakwesokudla uma usunxele).
Lapho ufaka i-cuff, umphetho wayo ophansi kufanele ube ngu-2,5 cm ngaphezu kwe-ulnar fossa. Ishubhu yokulinganisa isuka ku-cuff itholakala maphakathi nomphetho we-elbow.
I-stethoscope akufanele ithinte amashubhu we-tonometer. Kufanele itholakale kwinqanaba le-4th rib noma inhliziyo.
Umoya udonswa ngamandla (kuholela kancane ebuhlungwini).
Ukungena komoya okuvela ku-cuff kufanele kugeleze kancane - 2 mmHg. ngomzuzwana (ukukhishwa kuhamba kancane, kuphakama ikhwalithi yokulinganisa).
Kufanele uhlale etafuleni, uncike ngemuva kwesihlalo, umphiko kanye nengalo etafuleni kulele ukuze ama-cuffs abe sezingeni elifanayo nomugqa wenhliziyo.
Lapho ulinganisa umfutho wegazi ngomshini othomathikhi, kufanele futhi ulandele izigaba 1-4 kusukela emiyalweni engenhla:
Kufanele uhlale etafuleni, uncike ngesizotha ngemuva kwesihlalo, umphiko kanye nengalo etafuleni kulele ukuze i-cuff isezingeni elifanayo nelayini wenhliziyo.
Bese ucindezela inkinobho ye-Star / Stop bese idivaysi izothatha isilinganiso esithile somfutho wegazi, kepha ngalesi sikhathi akufanele ukhulume futhi unyakaze.
Cuff for tonometer nosayizi wayo
Ama-cuffs esibonelwa umfutho wegazi kumele akulungele usayizi, ukunemba kwezinkomba ngokuqondile kuncike kulokhu (ulinganise ukuzungeza kwengalo ngenhla kweqhubu).
Iqoqo lezinto zokusebenzisa umfutho wokulinganisa "i-Omron" zifaka ama-cuffs ahlukahlukene, ngakho-ke kuyadingeka ukucacisa usayizi nekhono lokuxhuma ama-cuffs angeziwe.
Kufakiwe imishini Ama-cuffs alandelayo anikezwa amadivayisi:
Inayiloni eyikhulisiwe ngaphandle kokugcina indandatho yokujikeleza kwamahlombe okungama-24-42 cm.
I-Nylon enensimbi egcina indandatho yomjikelezo wehlombe ka-24-38 cm.
I-Nylon enensimbi egcina indandatho yokujikeleza amahlombe kusuka ku-22-38 cm.
Ukhulisiwe ngaphandle kokubeka ibakaki enomjikelezo wamahlombe wama-22-39 cm.
Ama-tonometer athambelanayo (ngaphandle kwesibonelo se-CS Medics CS 107) anekhono lokuxhuma ama-cuffs ayi-5 ahlukene:
Cha. 1, thayipha H (9-14 cm).
Cha. 2, thayipha D (13-22 cm).
I-Medica No. 3, thayipha P (18-27 cm).
I-Medica No. 4, hlobo S (24-42 cm).
I-Medica No. 5, hlobo B (34-50 cm).
Qedela uku okuzenzakalelayo Ama-cuffs ama-Omron Fan-Shaped (22-32 cm) anikezwa i-cuffs fan. Noma kunjalo, kungenzeka ukuxhuma ama-cuffs angeziwe kula ma-tonometer, athengwa ngokwahlukana:
"Iparele" elincane + elincane (cm 17-22).
Ukujikeleza kwengalo enkulu (32-42 cm).
Qedela uku okuzenzakalelayo Ama-cuffs alandelayo alungele amadivayisi:
I-CM ejwayelekile yokucindezela, iphinda ijamo lesandla, usayizi ophakathi, (22-32 cm).
I-CL enkulu (32-42 cm).
I-CS2 Yezingane (17-22 cm).
I-Universal CW (22-42 cm).
Ingubo entsha ye-Omron Intelli Wrap (22-42 cm).
Ukucindezelwa, isizukulwane esisha se-Easy Cuff, siphinda ukwakheka kwesandla (22-42 cm).
To onobuhle auto amamodeliHBP-1100, HBP-1300 kunikelwa ama-cuffs amabili: umkhombandlela ophakathi nendawo wokulinganisa u-Omron GS Cuff M (22-32cm) kanye nomkhono omkhulu wokucindezela u-Omron GS Cuff L (32-42cm). Kungenzeka ukuthi ngaphezu kwalokho uthenge ama-cuffs kumasayizi alandelayo:
I-GS Cuff SS, i-Ultra Encane (12-18 cm).
I-GS Cuff S, encane (17-22 cm).
U-Omron GS Cuff M (22-32 cm).
I-GS Cuff XL, enkulu ngokwengeziwe (42-50 cm).